Eyona xabiso lika-2020 elisezantsi likaritsho kubonelelo lwefektri Intengiso eshushu ngamavili amathathu oritsho owenziwe ngemoto uMenzi kunye neFactory |Qiangsheng
2020 ixabiso eliphantsi likaritsho kwimveliso yemveliso Intengiso eshushu ngamavili amathathu oritsho
DC series ivili ezintathu
Umthamo omkhulu womthwalo:
I-400kg ye-auto rickshaw
I-auto rickshaw intle kwaye ilungile.
Yonke ipeyinti esetyenziselwa uoritsho weauto yipeyinti yodidi lweyop engangcolisekiyo, akukho vumba, akukho kuxobula.
2.Iibhayisikili ezinesakhelo semoto .
Emva kokusebenzisa isakhono, iitricycle zombane zeQiangSheng zomelele ngakumbi kunezinye ii-rickshaws.
3. Siphumelele i-CCCcertification kunye nesatifikethi se-ICAT
4.Ubonelelo olukhulu kunye nexesha elifanelekileyo.
5. Lo rickshaw wamavili amathathu uziqhelanisa neli candelo lezothutho zasedolophini okanye ezilalini, unokusetyenziselwa ukuthwala abakhweli ngokukodwa .
6.Imodeli yendlela yothutho , amandla aluhlaza , ingxolo ephantsi , iindleko eziphantsi zokusetyenziswa , ukonga ngaphezu kwe 70 % kune ticycle yepetroli .
2020 ixabiso eliphantsi likaritsho lokubonelela ngefektri
Ukupakishwa kwesampuli: Isampulu somkhweli we-tricycle yombane ayidityaniswanga kwityala leplanga, kunye nesakhelo sentsimbi yangaphakathi njengenkxaso.Isampulu yesitrato sombane yabakhweli ayinaso nasiphi na isaphulelo apha.
Umyalelo we-MOQ: 60V 1000W abakhweli yombane isixeko isikuta MOQ kaThixo 30sets.Kwilizwe elikhethekileyo, i-MOQ zizikhongozeli ezi-2*40ft ezibhekiselele kuMgaqo-nkqubo woCwangciso lweCustoms wasekhaya, njenge-Bangladesh.
Ukupakishwa kwesikhongozeli:Ikhonteyina epheleleyo yombane yokupakishwa kweodolo yeevili ezintathu ikwiCKD.Iinxalenye zentsimbi zetricycle yombane ezintathu zipakishwe yifilimu ye-bubble, iindawo ze-Sapre zipakishwe ngebhokisi, njengeemotor kunye nabalawuli.Kukho ifilim yogcino epakisha iibhokisi zeendawo ezisecaleni ezincinci ukunqanda umonakalo oselwandle.
Zonke iiodolo (ezinokwanelisa isikhongozeli esipheleleyo se-40feet) kwibhetri esebenza ngetricycle yombane inokufumana isaphulelo emva kwentlanganiso yeshishini.
Into yentlawulo:I-30% idiphozithi yi-TT njengentlawulo yangaphambili ngaphambi kokuvelisa.Kwaye ukuphumla kwe-70% yexabiso kufuneka ihlawulwe kwiveki enye ngaphambi kokulayisha i-tricycle yombane.
iLayisha into:1. Ixesha lokuziswa kwe-odolo yesampula limalunga nenyanga e-1 emva kwe-100% yentlawulo yangaphambili.2. Ixesha lokuhanjiswa kwe-odolo eliqhelekileyo li-20-25days emva kokufumana intlawulo ephezulu.
Inkonzo yasemva kokuthengisa ngo-2020Intengiso eshushu iivili ezintathu zikaritsho
TSHIPHU ixabiso likaritsho wombane Ulungelelwaniso olukhethekileyo dibana nathi !!!!
wamkelekile ukuba undwendwele umzi-mveliso wethu kwaye uthethe nathi!
Ngaphambili: 2020 moto ombane ophantsi ngebajaj auto rickshaw ixabiso letricycle yabantu abadala
Okulandelayo: Ngo-2020 i-tricycle yombane yabantu abadala efikelelekayo ngexabiso le-bajaj auto rickshaw
Uyilo oluncinci luka-2020 olunamavili amathathu e-bajaj tuk tuk Ch ...
echina eyona mveliso karitsho yebajaj yamavili amathathu...
2020 ECO friendly inkunkuma ilayisha umbane tri...
Uritsho webhetri woMkhweli weMarke yaseIndiya...
Umthamo ophezulu wokulayisha amandla aluhlaza triy yombane...
ITuk Tuk iyathengiswa Electric Tuk Tuk Izithuthi ezinamavili amathathu ITukTuk TukTuk Manufactures iTukTuks